話題の人物 TV・出版・報道向け写真ならアフロ | 写真素材・ストックフォトのアフロ
2018 FIFA W杯(13)
2021 J3リーグ Jリーグで初の女性主審
Referee Yoshimi Yamashita checks the pitch before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita arrives at the stadium before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita after the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita with players after the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita during the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita prepares to enter the pitch before 2nd-half during the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita leaves the pitch after 1st-half during the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita tosses a coin before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita (2R) before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita (2L) enters the pitch before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita prepares to enter the pitch before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita (R) talks to players before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)
Referee Yoshimi Yamashita warms up before the 2021 J3 League match between Y.S.C.C.Yokohama 0-2 Tegevajaro Miyazaki at NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Kanagawa, Japan, May 16, 2021. Yamashita is the first female referee to be appointed to a J.League match. (Photo by JFA/AFLO)